MPIBATA ENTANA NIFAMONO
Nifamono ny samy mpibata entana tetsy Ambanidia. Olona iray no maty rehefa voatsatoky ny antsibe teo amin’ny tendany.
BASY POLETA 9mm
Basy poleta 9mm no nampiasaina tamin’ny fanafihana ny farmasia Ivato.
SAHIRANA NY MPANALA FANADINANA
Tao anatin’ny oram-be tanteraka no nirava ny mpianatra izay avy niatrika ny fanadinam-panjakana Bakalorea omaly.
HERINARATRA AVY AMIN’NY MASOANDRO
Hahazo tobim-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro i Antsirabe ka ny orinasa Witec no hiandraikitra ny fanorenana izany.
Sazy an-terivozona 15 taona an-tranomaizina no azon’ireo olona izay nanafika sy nikasa ny hifofo ny ain’ilay mpanakanto malaza antsoina hoe Rah-Ckiky.
Toy ny fanaony isan-taona dia nanomboka omaly alatsinainy 2 septambra ny fampianarana maimaimpoana hiatrehana Bakalorea karakarain’ny antoko Tiako I Madagasikara eny Ambohimanarina.
Trano nipetrahan’ny Praiminisitra Rainilaiarivony tamin’ny 1863 ka hatramin’ny 1895 ilay niteraka olana tetsy Amboditsiry.
Efa nisy ny didim-pitondrana nosoniavin’ny filoham-pirenena Ratsiraka tamin’ny 1974 nanome ny trano an’ny fanjakàna. Rehefa nihazohazo teny anefa dia lasa feno mpandova ny trano ary samy nilaza ho tarana-dRainilairivony. Nesorina tamin-kery izy ireo omaly ary nampiasaina miaramila mihitsy ny fanatontosana ny didy izay naka ny trano ary homena ny fanjakàna.
GOVERNORA ANDIANY FAHAROA
Handrasana hivoaka amin'ity herinandro ity indray ny andiany faharoa amin'ny anaran'ireo izay hotendrena ho governoram-paritra. Mbola adihevitra be eo amin'izy ireo mpitondra anefa amin'izao ny fizarana ny faritra vatovavy sy fitovinany sy ireo distrika tsirairay handrafitra ny faritra roa ho sarahina ireo. Mbola olana ny fiadivana distrika.
LALANA MIFEHY NY MPANOHITRA
Mbola haverina dinihina amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka indray ilay lalàna mifehy ny mpanohitra. Mangataka ny hitondran'ireo loholona ny sosokevitr'izy ireo ny Antenimieram-pirenena amin'ity lalàna ity ary tsy horaisin'izy ireo anefa izany raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Efa hita taratra tokoa ny tsy fifankahazoan'ny Antenimiera roa tonta.
FANOHERANA NY TANAMASOANDRO
Tsy eken'ireo mponina ao Ambohitrimanjaka ny hananganana ny Tanamasoandro eo amin'ny tanimbaran'izy ireo. Efa maherin'ny 40 ha ny velarantany alaina amin'ny vahoaka madinika hanaovana an'ity fotodrafitrasa ity. Fatra-pisehoseho ny mpitondra fa efa milamina ny fifampiresahana amin'ny vahoaka kanefa tsy dia izay loatra no mitranga. Ny tena tsy zakan'ny mponina,ireo sinoa izay hanao ny tetikasa no tena tady handroaka azy ireo amin'ny taniny.
TAXI BE EFA TENA TSY IZY INTSONY
Mifatotra fingotra ny "rotules de direction" an'ilay fiara taxi-be izay nivadika tetsy Tsarasaotra-Ivato. Izany dia mbola manaporofo hatrany ny fisian'ny kolikoly eo amin'ny sampandraharaha misahana ny fitsirihana ara-teknika. Fiara toa izany ve dia mbola tokony hahazo hiasa, indrindra fa hitatitra olona? Betsaka izay efa maty izay noho ny olana ara-teknika amin'ny fiara ary mila mandray fepetra matotra momba ny fitisirihana ara-teknika izay matetika hanjakan'ny kolikoly.
Miezaka mamono afo ara-bakiteny mihitsy ny minisitry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy momba ny fahamaizan'ny alan'Ankarafantsika. Nandiso ny tsaho izay miely fa may ny ala ary tsy misy fandraisan'andraikitra izy. Tamin'ny 27 septambra no tapitra ny fahamaizana raha ny vaovao avoakan'izy ireo ary tsy nitohy intsony izany, omaly anefa dia mbola nisy ny nahita fa efa ho tonga eo amin'ny arabe mihitsy ny afo.
VAZAHA MIBORIDANA HITA FATY
Vazaha iray miboridana no hita faty natsingevan'ny ranomasina teo amin'ny mifanandrify ny seranan-tsambon'i Toamasina. Novonoina izy io dia natsipy tao anaty ranomasina raha araka ny fanamarihan'ny polisy siantifika. Tsy nisy naka ny razana raha tsy efa hariva be ny sabotsy teo noho ny fifanilihana andraikitra teo amin'ny mpamonjy voina an'ny kaominina sy ny ny an'ny ladoany.
Mpikarakara ny raharaha mahakasika ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika no nampanantsoin’ny Bianco ary nentina teo anivon’ny fampanoavana miady amin’ny kolikoly omaly. Fanodinkodinam-bolam-panjakana avy amin’ny fanaovana kolikoly no vesatra nanenjehana azy. Izao sahady izany dia efa nahazo volon-tany ny mpiasam-panjakana ambony, indrindra ireo izay nomena fahatokisana ary tan-dapa. Tamin’ny ora nanoratana dia mbola nitohy ny fihainoan’ny mpitsara mpanao famotorana azy.